Mpamatsy vokatra sy orinasa | Mpanamboatra vokatra China
Telefaona: +86 18041030986
[Kopia] Fehikibo vita amin'ny keramika
Fehikibo vita amin'ny keramika
Fehin-kibo alumina miangona
Kodiarana afovoany ketraka
Potassium fluoborate dia vovoka fotsy kristaly. Mety levona kely amin'ny rano, etanol ary etera, fa tsy mety levona amin'ny vahaolana alkaly. Ny hakitroka (d20) dia 2.498. Teboka: 530℃ (Lo)
Amin'izao fotoana izao, Yousheng koa dia nanangona hery vaovao amin'ny fampandrosoana ny lamba indostrialy. Mba hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra dia nanambola vola tamin'ny famolavolana peratra sy fitaovana familiana malalaka izy. Ny orinasa's vokatra mitarika manana andiany maro: lamba indostrialy landihazo rehetra, lamba indostrialy polyester rehetra, lamba indostrialy polyester-landihazo, sns. Ny vokatra lehibe indrindra dia mety amin'ny lamba emery ambadika.
Cryolite dia vovoka fotsy kristaly. Azo levona kely ao anaty rano, miaraka amin'ny 2.95-3.0 ny hakitroky, ary teboka miempo manodidina ny 1000 ° C. Mora ny mandray ny hamandoana ary mety ho simba amin'ny asidra mahery toy ny asidra sulfurika sy asidra hydrochloric hamorona ny sira vita amin'ny aliminioma sy sodium.
Zirconium corundum dia afangaro amin'ny hafanana ambony ao anaty lafaoro misy herinaratra miaraka amin'ny fasika zircon ho akora fototra. Izy io dia manana endrika matevina, rafitra matevina, tanjaka avo ary fikorontanana mafana tsara. Amin'ny maha-marokoroko azy, dia afaka mamokatra kodiarana fikosoham-bolo mavesatra ny asany izy io, izay misy vokany tsara eo amin'ny faritra vy, fanariana vy, vy vy mahazaka hafanana, ary fitaovana maro karazana; ho fanampin'izay, ny zirconium corundum koa dia akora marefo. Izy io dia fitaovana mety indrindra ho an'ny solo-tsary mivezivezy avo lenta ary ny filentehan'ny rano. Azo ampiasaina ihany koa izy io hanaovana biriky zirconium corundum ho an'ny fatana fandrendrehana fitaratra.
[Kopia] Zirconia Alumina
Ny abrasive amin'ny seramika dia vita amin'ny alimina manokana ho fitaovana lehibe, afangaro amin'ny karazan-javatra tsy dia novaina amin'ny tany, ary voadio amin'ny hafanana ambony. Manana hamafin'ny tena sy maranitra ny tenany. Yousheng dia miantehitra amin'ny foto-kevitra tokana momba ny fikosoham-bary ary manampy simika manokana hanakorontana ny seramika miaraka amin'ny toetran'ny fanapahana mangatsiaka. Ny abrasive vita amin'ny seramika dia afaka mitazona hery fikolokoloana maharitra kokoa, mba hahafahan'ireo fitaovana vita abrasive hahavita fiainana maharitra. Ny abrasive dia manana rindrambaiko malalaka be, izay azo ampiasaina amin'ny fanariana sy fikosehana amin'ny alàlan'ny fanerena avo lenta, ary ho an'ny fikolokoloana tsara ny fitaovana isan-karazany, ao anatin'izany ny fitotoan'ny fitaovana, ny fitotoana fitotoana, ny fitotoana crankshaft ary ny hafa.
Endri-javatra vokatra: teknolojia vaovao, fanamafisana ny tena, fikolokoloana maranitra, fanoherana ny hafanana avo, hamafisana avo lenta, fahombiazana avo lenta ary tsy mora hitafy, diamondra fanamiana sy fasika, fomba fiasa tsara, fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana, fametahana malefaka tsy misy chipping sy tombony hafa .
Ny vokatra dia mety indrindra amin'ny: karazana metaly sy metaly tsy metaly, fikosoham-bary vy vy, fikosoham-bary, alloys, diamondra, vera, seramika, akora semiconductor (karbônika silikaly, sns.), Akora magnetika (cores andriamby, ravina andriamby, ferrites, sns.) ary ireo vy metaly mora (firaka mafy, vy vy tungsten YG8, sns.)
[Kopia] Kodiarana fitotoana diamondra
Noterena mafana ny abrasives alimina avo lenta sy ny resina resina.
Endri-javatra vokatra: fiarovana ny vokatra, fahombiazana avo lenta, avo lenta, mateza mateza, miorina tsara ary mateza, miaraka amin'ny fihenan'ny fanoherana mahery vaika, fanoherana ny fiatraikany, fanoherana miondrika, hafainganam-pandeha haingana, fikosoham-bary, fiainana maharitra, sns.
Ny vokatra dia ampiasaina indrindra amin'ny: fikolokoloana, fanesorana ny harafesina, famolahana, fikosoham-by, fikosoham-bolo, fametahana seam chamfering, ary ny fanesorana ny tany.
Ny diamondra sy ny fehy resin dia voahidy mafy hanaovana ilay vokatra.
Kodiarana fitotoana diamondra
Eo amin'ny sehatry ny haitao poloney, Yousheng dia namorona kapila abrasive vaovao ho an'ny famolahana, ao anatin'izany ny vatan-kazo sandra sy volory, ary izy roa dia voahosotra sy natambatra. Ny kasety Velcro eo amin'ny lovia dia mifamatotra amin'ny vatan'ny volon'ondry, izay mora vory sy ampiasaina. Raha ampitahaina amin'ny vokatra polishing mahazatra, ny toetra mampiavaka ny kapila fasika dia ny fahafahany mandray vovoka sy vovoka namboarina tamin'ny fizotran'ny fanodinana ara-potoana, hanatsara ny fahitsiana ny fikarakarana ary hampihena ny vovoka sy ny vovoka manidina. Ankoatr'izay dia manana fiarovana tsara ny tontolo iainana izy io. Ireo fiasa rehetra ireo dia afaka manatsara ny tontolon'ny asa.
Vokatry ny corundum Brown, corundum misy kôlily ary zirconium corundum louvre:
Brown corundum, calundum corundum, ary zirconium corundum louvres dia azo ovaina amin'ny kodiarana fikosoham-bolo. Manana elastika mahery vaika izy ireo, fanoherana faneriterena avo lenta, fanoherana miondrika, fanamafisana tena tsara, taham-pitotoana ambony ary feo ambany. Izy io dia mety amin'ny fandefasana sy famolahana vy, vy, vy tsy misy fangarony, vy vy, aliminioma, hazo, plastika ary metaly hafa.
Kapila fangaro amina tontolo iainana karazana 28:
Ny kapila sanding 28 vita soa amina tontolo iainana dia vita amin'ny lamba emeraera manokana nifatotra tamina vodin-tany tia tontolo iainana. Ny kapila abrasive SG (super green) izay sariaka amin'ny tontolo iainana dia miavaka amin'ny fiarovana avo sy ny fahalemena tsara; ny lamba emery sy ny substrate dia samy sariaka amin'ny tontolo iainana. Ny fitaovana dia ampiasaina handotoana ireo vongan-dabozia sy hoso-doko amin'ny sambo, fiara ary fiaramanidina.